सेक्स र महिनावारी – Menstruation Education Nepal
BEYOND Nepal को बारेमा
सेक्स र महिनावारी
> सेक्स र महिनावारी
निशेचन कृया कसरी हुन्छ ?
महिनावारी चक्रमा डिम्बाशयबाट डिम्ब निस्कासन हुन्छ । उक्त डिम्ब डिम्बवाहिनी नलीको माध्यमबाट पाठेघरसम्म पुग्दछ । २४ घण्टा सम्म डिम्बवाहिनी नलीमा उक्त डिम्ब धेरै विस्तारै अघि बढ्दछ तसर्थ यस समयमा यदि त्यसस्थानमा शुक्रकिट उपस्थितरहेछ भने मिलन हुने सम्भाबना बढि हुन्छ । डिम्ब शुक्रकिटभन्दा धेरै गुणा ठूलो हुन्छ । तर एउटा मात्र शुक्रकिट डिम्बमा पस्छ वा मिलन हुन्छ । यसरी मिलन〈निशेचन〉 भएपछि डिम्ब आफै पाठेघरको भित्तामा टाँसिन्छ । यो कृया लगभग ६ दिनमा पुरा हुन्छ । यसपछि उक्त निशेचित डिम्ब मानब भु्रणको रुपमा विकसित हुन थाल्छ ।
तपाई गर्भवती भएको नभएको कसरी थाहा पाउनुहुन्छ ?
डिम्ब निशेचित भएको केही समयपश्चात तपाइँको शरीरले रागरसहरुमा परिवर्तन ल्याउन थाल्छ । यो परिवर्तनले तपाइँको शरीरलाई महिनावारी हुनबाट रोकी रहनगएको गर्भको विकासमा केन्द्रित गराउँदछ । यी परिवर्तीत रागरसलाई रगत तथा पिसाबको जाँचबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ । धेरै महिलाहरुले आफु गर्भवती भएको कुरा आŠनो महिनावारी रोकिएको कारणले तथा आफुमा भएको शारिरीक परिवर्तन जस्तै, तौल बढ्नु, स्तन बढ्नु आदीबाट थाहा पाउँदछन् । तर महिनावारी रोकिनु सधै गर्भवती भएको भन्ने कुराको संकेत भने होईन ।
महिनावारी भएको बेला पुरुषसंग शारिरीक सम्पर्क भएमा के हुन्छ ?
महिनावारी भएको बेला गर्भवती हुने संभावना धेरै कम हुन्छ किनभने यसबेला सामान्यतया डिम्ब निस्कासन हुदैन र भएको डिम्ब तथा पाठेघरको भित्तामा बनेको पाप्राहरु समेत पाठेघरबाट बहने प्रकृयामा हुन्छ वा बगिसकेको हुन्छ । तसर्थ डिम्ब र शुक्रकिटको मिलन हुने सम्भाबना हुदैन । तर पनि छोटो महिनावारी चक्र 〈लगभग हरेक २० दिन〉 भएका केही महिलाहरुमा महिनावारी शुरु भएको ४–५ दिनमा गर्भवती हुने सम्भावना रहन्छ ।र बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने महिनावारी भएको बेला शारिरीक सम्पर्क राखेमा विभिन्न रोग तथा संक्रमणहरु हुन सक्छन । त्यसकारण महिनावारी भएको बेला शारिरीक सम्पर्क नगर्नु राम्रो हो ।
पहिलो महिनावारी हुनु अगाडि पुरुषसंग शारिरीक सम्पर्क भएमा के केटिहरु गर्भवती हुन सक्छन ?
पक्का गर्भवती हुन सक्छन । गर्भवती हुन डिम्ब निस्कासन हुनपर्दछ र उक्त डिम्ब र शुक्रकिटको मिलन हुनपर्छ । पहिलो महिनावारी हुनु अगाडि डिम्ब निस्कासन हुन सक्छ तसर्थ पुरुषसंग शारिरीक सम्पर्क भएमा डिम्ब र शुक्रकिटको मिलन भई केटिहरु गर्भवती हुन सक्छन ।